Otu esi ebuli Apache gaa na ụdị kacha ọhụrụ na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
October 9, 2021 August 14, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Apache kacha ọhụrụ
Na-agbakwunye Apache PPA
Kwalite Apache site na PPA
Nyochaa ụdị na ọkwa Apache
Hazie UFW Firewall maka Apache
Otu esi emelite Apache
Apache, bụkwa nke a maara dị ka Ihe nkesa HTTP Apache, bụ otu n'ime ngwa sava weebụ a na-ejikarị eme ihe n'ụwa niile n'ime iri afọ ole na ole gara aga. Apache na-abịa Ubuntu 20.04 ebe nchekwa ndabara; Agbanyeghị, ọtụtụ ebe nchekwa LTS anaghị emelite ya ka ọ bụrụ ụdị kachasị ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere ihe dị ugbu a sitere na onye nrụpụta. N'okwu a, Apache nwere ike tufuo atụmatụ ọhụrụ na ndozi yana ndozi ahụhụ na-enweghị nchekwa.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi kwalite sava weebụ Apache na Ubuntu 20.04.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye sava weebụ Apache na Ubuntu 20.04 site na mmalite, a na-atụ aro ka iji nkuzi anyị. Otu esi etinye sava weebụ Apache na Ubuntu 20.04
Akụrụngwa achọrọ: Ihe nkesa Apache dị ugbu a
Site na ndabara, akaụntụ ejiri Ubuntu na-enye ọkwa sudo. N'agbanyeghị, were ya na ị ga-enye ndị ọzọ akaụntụ sudo/mgbọrọgwụ ohere. N'okwu ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ike ịnweta ya mgbọrọgwụ paswọọdụ iji iwu su ma ọ bụ gaa na nkuzi nkuzi anyị Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Ubuntu.
Tupu ịmalite, ị ga-eguzobe ụdị nke sava weebụ Apache 2 ị na-agba ugbu a:
Na-agbakwụnye Apache PPA
Nzọụkwụ mbụ na ịkwalite Ubuntu 20.04 Apache webserver gị na ụdị kachasị ọhụrụ na-agbakwụnye PPA by Ondřej Surý's. Maka ndị na-amaghị, Ondřej bụ onye na-elekọta PHP na Debian ma na-edobe Apache PPA ọhụrụ maka Ubuntu yana Nginx na PHP.
Iji tinye PPA, jiri iwu na-esonụ na njedebe gị:
Nke a ga-agbakwunye PPA na-akpaghị aka wee nweta ume iji melite ndepụta nchekwa gị.
Ugbu a, ị nwere ike ịgba ọsọ njikwa ngwugwu dabara adaba, nke ga-akwalite sava weebụ Apache 2 dị ka ndị a:
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iji mmelite na nkwalite dị ka ndị a:
Ọ bụrụ na nkwalite Apache 2 dị, mee ihe ndị a:
Ozugbo nkwalite ahụ mechara, lelee ụdị Apache ị na-eji ugbu a site na iwu a:
Dịka ị na-ahụ, ụdị ahụ agbanweela site na ụdị nchekwa nchekwa Ubuntu nke Apache 2 Ụlọ ọrụ ahụ bụ 2.4.41 € ruo ihe nrụpụta Apache kachasị ọhụrụ nke PPA sitere n'aka Ondřej Surý wu 2.4.51.
N'ikpeazụ, nyochaa ọkwa site na iji ihe ndị a sistemụ iwu:
Ekele, ị kwalitela Apache ka ọ bụrụ ụdị kachasị ọhụrụ a na-enye.
Mgbe ị wụnye sava weebụ Apache 2, ị ga-achọ ịgbanwe ya Iwu UFW ma ọ bụrụ na etinyere UFW. Ka ikwe ka mpụ banye na ọdụ ụgbọ mmiri webụ ndabara. Luckily, n'oge echichi, Apache debanyere onwe ya na UFW iji nye profaịlụ ole na ole enwere ike iji mee ka ma ọ bụ gbanyụọ ohere, na-eme ka ọ dị mfe na ngwa ngwa ịhazi.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịwụnye UFW firewall, mee iwu a:
Ozugbo etinyere UFW, mee ka UFW malite ma na-arụ ọrụ na buut sistemụ.
Na-esote, depụta profaịlụ ngwa ka ịhụ profaịlụ Apache nke dị site na iwu a:
Site na mmepụta n'elu, ị nwere nhọrọ profaịlụ atọ ịhọrọ site na. Iji kwatuo ya, Apache Ọ na-agba na ọdụ ụgbọ mmiri 80 (HTTP), Apache echekwara na-agba ọsọ na ọdụ ụgbọ mmiri 443 (HTTPS), na Apache zuru ezu bụ ngwakọta nke ikwe ma. Nke a na-ahụkarị bụ Apache Full ma ọ bụ Apache Secure.
Maka nkuzi a, ebe anyị edobebeghị SSL, anyị ga-eme ka profaịlụ Apache jiri iwu a:
Dịka n'elu, agbakwunyere iwu maka ma IPV4 na IPV6. Mgbe emechara, ị nwere ike gbanyụọ profaịlụ a wee mee ka nchekwa naanị ma ọ bụ gbanyụọ iwu Apache wee jiri Apache zuru oke kama.
Ka imelite Apache n'ọdịniihu, naanị ihe ị ga - eme bụ ịgba ọsọ iwu mmelite dabara adaba dị ka ọhụrụ repository na-agbakwunyere na apt isi iyi ndepụta:
Ọ bụrụ otu dị, kwalite Apache dị ka ndị a:
Ma ọ bụ kwalite Apache n'onwe ya:
Nke ahụ bụ naanị ihe ị ga-eme ka emelite ụdị gị.
N'ime obere nkuzi a, ị mụtala otu esi ebuli Ubuntu 20.04 gaa na sava weebụ Apache 2 kachasị ọhụrụ. N'ozuzu, iji ụdị kachasị ọhụrụ na ebe nchekwa Ubuntu nwere ike irite uru site n'inwe atụmatụ kachasị ọhụrụ na mmezi ahụhụ. Naanị ihe dị ala bụ mgbe niile ma ọ bụrụ na onye na-elekọta ya kwalite PPA ngwa ngwa ma ọ bụrụ na nchekwa nchekwa na-apụta maka nrigbu a ma ama. Otú ọ dị, a na-edobe PPA nke Ondřej nke ọma ma na-emelite ya ngwa ngwa, yabụ ị kwesịrị inwe obi ike na iji PPA a.
Categories Ubuntu Tags Apache, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye Tor Browser na Rocky Linux 8
Otu esi etinye WP Rocket Cache na WordPress n'ime RAM na TMPFS